निर्वाचन प्रभावित बनाउन विप्लव समूहको श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट ! – Medianp
NKJUNGप्रकाशित मिति: शुक्रबार, मङि्सर ०१, २०७४१६:२८
काठमाडौं, १ मंसिर । यही मंसिर १० र २१ गते मुलुकभर दुई चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै उम्मेदवारहरु भोट माग्न व्यस्त छन् । राजनीतिक दलहरु चुनावी सभा र प्रचार प्रसारमा रहेका छन् । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन विभिन्न रणनीति तय गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न लागि परेको बताउँदै आएको छ । तर, उम्मेदवारमाथि श्रृंखलाबद्ध बम आक्रमण र विद्युतीय एम्बुस विस्फोट भइरहेका छन् ।
निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती, उपप्रधामन्त्री कृष्णबहादुर महरा, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्वमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, वर्षमान पुन, नारायणकाजी श्रेष्ठ र शेरधन राई तथा वहाल सिँचाई राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनसहितका एक दर्जन उम्मेदवार लक्षित बम आक्रमण र एम्बुस विस्फोट गराइएको छ । वर्षमान पुनमाथि दोहोर्याएर बम आक्रमण भएको छ । तर, हालसम्म एक जना पनि आक्रमणकारी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीले उम्मेदवारमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, उसले यसलाई अस्वीकार गर्दै खण्डन पनि गरेको छ । उम्मेदवारमाथि बम आक्रमण आफूहरुले नगरेको विप्लव समूहले बताउँदै आएको छ । आफूहरुको नाममा तेस्रो पक्षबाट उम्मेदवारमाथि आक्रमण भइरहेको उसको भनाइ छ । मन्त्री, पूर्वमन्त्री, शीर्ष नेता र उम्मेदवारमाथि भइरहेको आक्रमणका घटनालाई सामान्य रुपमा सरकारले लिएको देखिन्छ । एकपछि अर्काे उम्मेदवारमाथि आक्रमण भइरहँदा आवश्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्न र आक्रमणमा संलग्न पक्राउ नपर्नु नै सरकारको सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी हो ।
निर्वाचनको सुरक्षामा विप्लव समूह चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको प्रहरीले विभिन्न बहाना र कारणमा सो समूहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिरहेको छ । तर, नेताहरुमाथिको आक्रमणमा संलग्नहरु भने हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । आज बिहानसम्म निर्वाचन विथोल्ने कार्यमा संलग्न एक सय ७५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक मनोज नेउपानले मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्वाचन विथोल्ने कार्यमा संलग्न एक सय ७५ जना पक्राउ गरेको जानकारी दिए ।तर, नेतामाथि भइरहेका आक्रमणमा संलग्न भने पक्राउ पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता नेउपानले जानकारी दिए । नेताहरुमाथि बम आक्रमणमा विप्लव समूह वा अन्य कुन समूह संलग्न छ भन्ने विषयमा अहिले नै भन्न सकिँदैन, अनुसन्धानका क्रममा छौं’, प्रहरी प्रवक्ता नेउपानले मिडिया एनपीलाई बताए ।
सानोतिना कुरामा आवाज बुलन्द बनाउने दल र तिनका नेताहरु पनि उम्मेदवारमाथिको आक्रमणमा मौन देखिन्छन् । एकाध विज्ञप्ति जारी गरेर नेताहरुले औपचारिकता निभाउनु बाहेक नेताहरुमाथिको आक्रमणका विषयमा कुनै चासो र चिन्ता लिएको देखिँदैन ।
निर्वाचन विथोल्न विप्लव समूहले मतदातालाई आतंकित बनाउन बम विस्फोट गराएको निष्कर्षमा पुगेका राजनीतिक दलका नेता र गृह प्रशासन उम्मेदवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न असफल भएको छ । नेताहरुमाथि बम आक्रमण र विद्युतीय एम्बुस राखेर मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने कार्यमा ‘को संलग्न छ’ यस विषयमा न प्रहरीले आक्रमणकारीलाई पक्राउ गर्न सकेको छ नत आक्रमणको आरोप खेपेको विप्लव समूहले पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्न सकेको छ । जघन्य अपराध भइरहँदा पनि आक्रमणकारी पक्राउ पर्न नसक्नु गृह मन्त्रालयको सुरक्षा रणनीति नै असफल भएको हो कि ? भन्ने आशंका गरिएको छ ।
मुलुकमा अहिले गृहमन्त्री छैनन् । गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले हेरेका छन् । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विना विभागीय बनाएर प्रधानमन्त्री आफैंले गृह प्रशासन हेरेका छन् । तर, आसन्न निर्वाचनको मतदान आउन १० दिन बाँकी रहँदा उम्मेदवारमाथि बम आक्रमण भइरहेको छ ।
आजै उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्व मन्त्रीद्वय वर्षमान पुन र डा. रामशरण महतमाथि बम आक्रमण र विद्युतीय एम्बुस विस्फोट गराइएको छ ।
शीर्ष नेता, मन्त्री तथा उम्मेदवार असुरक्षित बन्दै गएका बेला मतदाता त्रसिद बनेका छन् । नेताहरुको आक्रमणमा संलग्न पक्राउ गरेर मुलुकमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन नागरिकस्तरबाट आवाज उठ्न थालेको छ ।
आउँदो मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा मुलुकभर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ ।
आइसिएको ग्लोबल बोर्ड सदस्यमा नेपाल निर्वाचित